Banky Iraisam-pirenena : Nanome 60 tapitrisa Dolara an’i Madagasikara -
AccueilSongandinaBanky Iraisam-pirenena : Nanome 60 tapitrisa Dolara an’i Madagasikara
Banky Iraisam-pirenena : Nanome 60 tapitrisa Dolara an’i Madagasikara
Ho fampandrosoana ny tanàn-dehibe, dia nametraka tetikasa iraisana antsoina hoe « PRODUIR » na « Projet de Développement Urbain Intégré et de Résilience du Grand Antananarivo » ny Banky Iraisam-pirenena sy ny minisitera eo anivon’ny Prezidansa misahana ny tetikasan’ny Filoham-pirenena sy ny Fanajariana ny Tany ary ny Fampitaovana (M2PATE).
Noho izany indrindra, dia nanome vola mitentina 60 tapitrisa Dolara ho amin’io tetikasa fampiroboroboana mirindra io ny tontolo an-drenivohitr’Antananarivo sy ny manodidina, sy ny fahafahany miatrika ny faharefony ny Banky Iraisam-pirenena.
Araka izany, dia vinavinaina ho manodidina ny 700 000 eo ho eo ireo hahazo tombontsoa amin’ity tetikasa “PRODUIR” ity. Voalaza fa mahazo tombontsoa manokana amin’izany tetikasa izany ny tanànan’Antananarivo, indrindra fa ireo faritra iva.
Raha ny fanazavana, dia maromaro ny mandrafitra ny tetikasa, ka anisan’izany ny fanatsarana ny fiarovana amin’ny tondra-drano. Fa anisan’ny goavana amin’izany koa ny fanatsarana ny firafitry ny tanàna sy ny fisitrahana izany, ny fanatsarana ny fitantanana ny tanàn-dehibe, sns.
Raha ny zava-misy ihany koa, amin’izao fotoan’ny orana izao, dia misy hatrany ny tondra-drano amin’ireo faritra maro eto an-drenivohitra noho ny olana amin’ny famoahan-drano amin’ireo lakandrano lehibe noforonina sy natao ho amin’izany. Anisan’ireny ny lakandrano C3 sy ireo « bassins tampons » miaraka aminy amin’iny faritra Anosibe sy Andavamamba iny, izay namboarina tamin’ny taona 1997. Natao indrindra izy iny mba hentina hitarihina ireo rano avy amin’ny lemaka atsimo sy ny faritra iva. Voalaza fa mirefy 12 km iny lakandrano iny, nefa tsy afaka manao ny asany intsony noho ny fanorenana tsy ara-dalàna sy fanotofana etsy sy eroa, hany ka lasa difotry ny rano ireo faritra rehetra lalovany isaka ny misy rotsak’orana.
Noho izany indrindra, dia hisy ny fanamboaran a atao amin’ny alalan’io tetikasa « PRODUIR » io, toa ny fanadiovana ny lakandrano, fanamafisana ny sisiny sy fanamboarana ny manodidina azy, sns.